Materazzi Oo Shaaciyay Wixii Uu Zidane Ku Yiri 2006 Ka Hor Inta Aan Caloosha Laga Tees-teen %
Marco Materazzi, ayaa wuxuu shaaciyay wixii uu Zinedine Zidane, ku yiri intii lagu jiray Final-kii caan-baxay ee koobka aduunka ee 2006, sida uu baahiyay Website-ka caanka ah ee lagu magacaabo Give Me Sport.
Xulka Faransiiska oo uu hogaaminayay Zidane, ayaa la dheelay Italy oo uu hogaaminayo Fabio Cannavaro, kulankaas Final-ka ahaa, waxaana 90-ka daqiiqo lagu kala baxay 1-1, oo ay dhaliyeen Materazzi iyo Zidane.
Shan daqiiqo oo lagu daray ciyaarta qeybteedii labaad waqtiga dheeriga ah ayaa Zidane, wuxuu Caloosha ka tees-teeyay Materazzi, waxaana taasi ay keentay in lasiiyo Kaarka Gaduudan, isagoona garoonka isaga baxay.
Ugu dambeyn, xulka qaranka kubada cagta Talyaaniga ayaa wuxuu ku qaaday koobka aduunka ee sanadkii 2006 Rigoorayaal 5-3 ah, waxayna ahayd markoodii ugu horeysay tan iyo sanadkii 1982-dii.
Warar leysla dhexmarayo ayaa waxay sheegayeen in Materazzi, uu ku sabab saday in Caloosha laga Hirtiyo kadib markii uu wax la sheegay qoyska Zidane, laakiin isaga ayaa sheegay in uusan marnaba caynin Hooyada Zidane.
Zidane, hooyadiisa ayaa waxay dhimatay ama ay Geer-yootay isagoo macalinka hada ee Real Madrid, ah 15-sano jir.
Laakiin, Daafacaan ayaa sheegay in wax xoogaa uu ka sheegay Zidane, walaashiisa, taasoo keentay in la Tees-teeyo, waxaana ay ahayd mid kamid ah dhacdooyinkii ugu caansanaa ee ka dhacay kubada cagta, in la xasuusan yahay.
Sikastaba, macalinka waqti xaadirkaan ee Real Madrid, Zidane ayaa Casaankaas la siiyay wuxuu kula biiray dhigiisa Rigobert Song Liiska xidigaha kaliya ee Final-ka koobka aduunka laga saaray ama Roose qaatay, mana jiro ciyaaryahan sidaas horey usameeyay.
Marco MaterazziReal MadridZidane
Waa Sidee Kala Sareynta Horyaalka Somali Premier League